Ngaba umdiliya yiDayimane kubuRhwebo boLuntu? | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 9, 2015 NgoMvulo, Juni 8, 2015 Douglas Karr
Ngelixa bendise I-IRCE, Ndaye ndonwabile xa isithethi esinye, uDanny Gavin, wandimisa wandixelela ukuba undibonile ndithetha kwiminyaka eyadlulayo kumsitho owawuse Austin. UDanny ngomnye wabathengisi abaphambili be-Intanethi… ukuphuhlisa intengiso ye-Intanethi kunye namaphulo eendaba ezentlalo Iidayimani zikaBrian Gavin. Ngobungcali bakhe, uncedisiwe ukuqhubela phambili i-BGD kwinqanaba le-Intanethi ye-Retailer ephezulu ye-1000 kunye ne-50 yeeNkampani ze-E-Commerce ezikhawulezayo.
Siza kwabelana ngezinto ezimangalisayo Umdiliya weBGD ii-loops kulo lonke eli thuba zivela kwiBrian Gavin Diamonds, ukubeka izinto ezibonakalayo kwindlela abalisebenzise ngayo iqonga.
Ukusuka kwi-Idea to Design
Ndibuze uDanny ukuba kutheni ebelapho kwaye undixelele ukuba wayethetha ngempumelelo engummangaliso iBGD ebenayo nayo Vine. Kwaye asithethi ngamanani amancinci apha:
Sebenzisa i-Vine influencers, i-BGD ikwazile ukufikelela ngaphezulu kwezigidi ezi-6 zokujikeleza kwiVine (emalunga nezigidi ezi-2 zabantu) nangaphezulu kwama-445 ezabelo kwi-Twitter.
Iphulo labo lomdiliya lifumene ukwamkelwa okuphezulu kupapasho oluninzi, kunye nokubekwa kwinqanaba # 2 kuphela ngasemva kukaTiffany kwimikhankaso yentengiso yevenkile yobucwebe ngo-2014 (JCK).
Ngaphandle kokuhla kokuthengiswa kukhuphiswano phakathi koLwesihlanu oMnyama kunye neKrisimesi, i-BGD ifumene irekhodi lokukhula kwe-45% ye-YOY kunye nokukhula kwe-13% ye-YOY kwi-Q1 yowama-2015.
I-BGD ikwabone ukonyuka okumangalisayo kwe-20% yokugcwala ngokuthe ngqo ukuya kwiwebhusayithi ukusuka kwisiqingatha sokuqala sika-2014.
Lowo ayingomsebenzi olula onikwe ukhuphiswano olunobundlongondlongo kule shishini. Iidayimani zikaBrian Gavin ngumthengi ozibonelela ngemali ozifumanela yena kunye ne-e-tailer yedayimani ezabalazela ukwandisa ulwazi ngebrand online ngelixa ukhuphisana nohlahlo-lwabiwo mali olukhulu lwabakhuphisana nabo.
Umceli mngeni kukuba i-BGD kufuneka ifumane indlela efanelekileyo yokukhuphisana nabantu abakhuphisanayo kwi-Intanethi nakwasekhaya ngokusebenzisa imithombo yeendaba yoluntu eya kuthi iseke uphawu lwesazisi ekwandiseni ukugcwala kwiwebhu kunye nokunyusa ukuthengisa.
Isicwangciso sikaDanny yayikukudala ikhalenda yokuhlela eguquguqukayo eyavumela i-BGD ukuba yenze imali ngexesha elifanelekileyo kunye neziganeko ezifanelekileyo ngokukhupha iividiyo zeveki ezonwabisayo kunye ne-whimsical kwiqonga elinokwabiwa kakhulu.
Bavelise iikhonsepthi malunga nekhalenda yethu yokuhlela, bavelisa umxholo wevidiyo, bayikhuthaza ngamajelo eendaba ezentlalo kunye nabaphembeleli beVine abafikelela kubo.
Ithoni kunye nokusondela kumyalezo wokuyila yayikukungqinelanisa ubukho bethu kwi-intanethi kunye nomfanekiso wethu wobungangamsha wobuhle kunye nokuyila. Ukuze sikhuphisane nabantu abakhuphisana nohlahlo-lwabiwo mali oluphezulu, kufuneka sikhethe indawo ekujoliswe kuyo ngabaphulaphuli (18-44), kodwa apho okhuphisana nabo babengekho.
Ngokusebenzisa umdiliya, i-BGD ayikhange ikwazi ukungena kubaphulaphuli abancinci (18-20) eqongeni, kodwa nakubaphulaphuli be-Twitter (18-49) ngenxa yokwabiwa okuphezulu kunye nokudityaniswa kwamaqonga amabini. Umxholo ucacile, unomdla, kwaye wahlukile, kodwa uhamba ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukuba ufune umbukeli ukuba awubukele kwakhona.
Umhla wesi-4 kaJulayi
Ezi ntlobo zeevidiyo zinxibelelana nesizukulwana esihambayo (esijolise kubemi abafundileyo) kwaye zimfutshane ngokwaneleyo ukuba zingaphazamisa kwaye zifundise ngaphandle kokuchitha ixesha lababukeli. Le ndlela kunye neethoni zazisebenza ngokuqhuba ukugcwala kwiwebhusayithi kunye nokuthengisa ukuqhuba.
Umbulelo okhethekileyo kuDanny ngokundinceda ndibeke lo myalezo! Qiniseka ukuba undwendwela Iidayimani zikaBrian Gavin kwizacholo zakho zesiko!
tags: brian gavin iidayimaniinto yokuphononongaUDanny gavinezentengisoezentengisoumdiliyaamaphulo omdiliyaisifundo semeko yediliyayorhwebo lomdiliyaiindidi zediliyaiziphumo zomdiliya